फेसबुक सुरु भएको १६ वर्ष पूरा, मार्क जुगरबर्गले कसरी सुरुवात गरे ? – Lokpati.com
सरकार प्रधानमन्त्री अमेरिका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेपाली काँग्रेस नेकपा प्रचण्ड केपी शर्मा ओली नेपाल प्रहरी अपराध पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड चितवन पक्राउ मृत्यु राशिफल
फेसबुक सुरु भएको १६ वर्ष पूरा, मार्क जुगरबर्गले कसरी सुरुवात गरे ?
By लाेकपाटी न्यूज On २५ माघ २०७६, शनिबार १६:१०
एजेन्सी। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक सुरु भएको १६ वर्ष पूरा भएको छ। यसै वर्ष फेसबुकले १६ औं जन्मदिवस मनाएको छ।
मार्क जुगरबर्ग र हावर्ड युनिभर्सिटीका उनका चार जना साथी मिलेर ४ फेब्रुअरि सन् २००४ मा सोसल नेटवर्किङ प्लेटफर्म द फेसबुकको सुरुवात गरेका थिए। फेसबुकलाई १६ वर्षको यात्रामा विभिन्न आरोप पनि लाग्यो। कम्पनिका डाटा प्राइवेसीसँग सम्बन्धीत केही विवाद पनि भयो। विभिद टिका टिप्पणीका बावजुत पनि अहिले फेसबुकमा २ बिलियन युजर्स जोडिएका छन्।
फेसबुक बनाउनु अघि मार्क जुगरबर्गले फेसमास बनाएका थिए। सन् २००३ मा जुगरबर्गले युनिभर्सिटी डेटाबेस ह्याक गरेर केही फोटो चोरेर उनले वेभसाइटमा अपलोड गरेर लाईभ गरी दिएका थिए। पछि हावर्ड प्रशासनले वेभसाइट शटडाउन गरेर मार्क जुगरबर्गमाथि सुरक्षा भंग गरेको आरोप लगाए। कपीराइट उल्लंघन गरेको र व्यक्तिगत गोपनियता उल्लंघन गरेको आरोप लाग्यो। पछि उक्त आरोपबाट जुगरबर्गले सफाई पाए।
त्यहि वर्षको मार्चमा द फेसबुक आइवी लीग युनिभर्सिट र कोलम्बियामा भाइरल भैसकेको थियो। सन् २००५ अगस्तमा आफ्नो डोमेन नामवाट ‘द’ भन्ने शब्द हटाए र दुई लाख डलरमा अबाउटफेस कर्पोरेशनबाट फेसबुक डटकम नामको डोमेन खरिद गरे। २००५ सम्ममा फेशबुकको विस्तार युकेको युनिभर्सिटीमा विस्तार भएको थियो भने फोटो अपलोड गर्ने फिचर पनि सुरु भैसकेको थियो। फोटो राख्ने फिचर सुरु गर्दासम्म ६ मिलियन युजर जोडिइ सकेका थिए।
सन् २००६ मा महत्वपूर्ण फिचर लञ्च गरे। सुरुमा फेसबुकमा इमेल एड्रेस राखेपछि १३ वर्ष उमेर पार गरेका जो सुकै व्यक्ति सहभागी हुन् सक्थे। फेरि अर्को फिचर थपियो फेसबुक नोट्स। जुन फिचर कवि एवं लेखकको बीचमा काफी लोकप्रिय भयो। फेसबुकमा जोडिनेहरु क्रमश बढ्दै गए। सन् २०१२ अप्रिलमा फेशबुकले १ बिलियन डलरमा इन्स्टाग्राम खरिद गर्‍यो। सन् २०१४ फेब्रुअरिमा १६ बिलियन डलरमा ह्वाट्सअप अधिग्रहण गर्‍यो।